Mpanao fihetsiketsehana an’arivony ao Armenia no mitaky ny fialàn’ny Praiminisitra Pashinyan · Global Voices teny Malagasy
Olona maherin'ny 200 no voalaza fa voasambotra
Voadika ny 05 Mey 2022 15:56 GMT
Diabe tao Yerevan nataon'ireo olona an'arivony mitaky ny fialàn'ny Praiminisitra. Pikantsary avy amin'ny fandefasana nivantana nataon”i Zabby.
Raha toa ireo olona manerantany nidina andalambe mba hanamarika ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Mpiasa tamin'ny 1 May, tao Yerevan, renivohitr'i Armenia kosa, olompirenena an'arivony no nanomana famoriam-bahoaka fanoherana ny governemanta nitakiana ny fametraham-pialàn'ny Praiminisitra amperin'asa, Nikol Pashinyn.
Ny fandeferana mety ho ataon'ny governemanta mikasika an'i Karabakh no niteraka ireo fanoherana – faritany iray ifandroritana hatry ny ela ka nahatonga an'i Armenia sy Azerbaidjan niady nandritra ny 44 andro tamin'ny 2020. Araka ny voalazan'ny media ao an-toerana, mpanao fihetsiketsehana efa ho 200 no voasambotra tamin'ny 2 May, raha toa nitohy ireo fihetsiketsehana ary nampiasa herisetra ny polisy hanaparitahana ny vahoaka. Araka ny voalazan'ireo nanatri-maso sasantsasany, maherin'ny 10 000 ireo olona nanatrika ilay famoriam-bahoaka. Araka ny nambaran'ny Civilnet.am, media Armeniana iray, “ireo mpanao fihetsiketsehana, izay nisalotra ny anarana hoe Hetsika Fanoherana, dia nilaza ihany koa fa amin'ny Alatsinainy dia hametraka tranolay eo amin'ny kianjan'i Frantsa izy ireo, sampanan-dalana iray lehibe ao afovoan'i Yerevan, mba hanaovana fitokonana tsy voafetra”. Fanampin'izay, antsoin'izy ireo hanao fitokonana ny mpiasa ary ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mba tsy hianatra.”
Hetsipanoheran'ny mpanohitra : 2 May
Ny 1 May, nanao hetsi-panoherana goavana tao Yerevan ny vovonan'ny mpanohitra Armenia & I Have Honor hitakiana ny fialàn'ny Praiminisitra Pashinyan, taorian'ny nanambaràny (13 Aprily) fa nangatahan'ny fianakaviambe iraisampirenena ny ankolafy Armeniàna mba hilefitra mahakasika ny satan'i Nagorno-Karabakh…
Tao anaty lahatsary – Kianjan'i Frantsa tao #Yerevan.
Hatramin'ny maraina, Nobahanan'ireo #Armenian mpanohitra ny afovoan'ny renivohitra, mitaky ny fialàn'ny Praiminisitra #Pashinyan.
Loharanom-baovao maro nanamafy fa maherin'ny 10 000 no efa nanjohy ny andiana #hetsipanoherana tsy voafetra nataon'ireo #mpanohitra
— JAMnews (@JAMnewsCaucasus)
Nanomboka tamin'ny volana Aprily ny fihetsiketsehana fanoherana ny governemanta rehefa heno siosio fa mety handefitra ny Praiminisitra Nikol Pashinyan mikasika ny sata faran'ny faritra Nagorno-Karabakh, taorian'ny nanatrehany ny fihaonana tamin'ny 6 Aprily tany Bruxelles, niaraka tamin'ny Filohampirenen'i Azerbaidjana Ilham Aliyev, notarihan'ny Filohan'ny Filankevitra Eoropeana Charles Michel. Nandritra ilay fihaonana, nampanantena ireo mpitarika roa ireo fa hijery izay “mety hisian'ny fifanarahana fandriampahalemana” mba hamahàna amin'izay ny fifandirana.
Andro maromaro taorian'ny fitsidihany tany Bruxelles, nilaza i Pashinyan tao anaty lahateniny tao amin'ny parlemanta nasionaly fa ny “fianakaviambe iraisam-pirenena dia nangataka an'i Armenia mba hilefitra momba ny satan'ilay faritany ifandroritana”.
Ho setrin'izay, nandany fanapahankevitra iray ny Parlementa ao Nagorno-Karabakh izay nilaza fa : “tsy misy governemanta manana zo, amin'ny mody fampidirana ny resaka fandriampahalemana, ka hampidina ny fetran'ny faifampiraharahàna momba ny sata azo ekena ho an'i Artsakth [Nagorno-Karabakh] ary ny zo iraisampirenena momba ny fanambaràna samirery ny fizakantena.”
Nandritra izay fotoana izay, nilaza ny Filoha lefitry ny Parlemanta sady lehiben'ny mpanohitra, Ishkhan Sagatelyan, fa : “Tsy azontsika ekena mihitsy izay sata politikan'i Karabakh ao anatin'i Azerbaidjan.” Nilaza ihany koa i Sagatelyan fa, “tsy maintsy hanomboka amin'ny Alatsinainy [2 May] ny fanentanana lehibe ho amin'ny tsy fankatoavan'ny sivily.”
Ankoatr'izay, tany am-piandohan'ny Aprily, ilay lasa ho Minisitry ny Raharaham-bahinin'i Karabakh ho azy teo, Davit Babayan, dia nanambara fa, “hitarika rà mandriaka sy famotehana an'i Artsakh ireo fikasàna rehetra hampiditra an'i Artsakh ho ao anatin'i Azertbaidjan.” Nilaza ihany koa i Babayan teo amin'ny Sampana Armeniàna ao amin'ny Radio Liberty fa niteraka “onjam-pahatezerana tao Nagorno-Karabakh” ilay fanambaràn'ny Praiminisitra.
Nokarakaraina talohan'ny nandehan'i Pashinyan tany Bruxelles ireo hetsipanoherana. Araka ny voalazan‘i OC Media, media tsy miankina iray izay mandrakotra mandrakotra ny vaovao avy ao Kaokazy, hoe, “mpanao fihetsiketsehana maherin'ny iray tapitrisa no nivory tao Yerevan, notarihan'ireo antoko mpanohitra ao amin'ny parlemantera Armeniàna. Nagatahan'izy ireo ny governemantan'i Pashinyan mba hametra-pialàna ary tsy hilefitra amin'i Azerbaidjan.
Ireo mpitsikera dia niampanga azy ho vonona hanaiky ny fanamafisana ny fifehezan'i Bakou an'i Nagorno-Karabakh. Niaro tena i Pashinyan, tamin'ny filazàna fa ireo fifampiresahana vao haingana tamin'i Azerbaidjan dia tsy midika velively ho fileferana amin'i Karabakh. Nandritra ny fivoriana manokan'ny Parlementera, nanambara i Pashinyan hoe : “Ambaranay fa tsy tokony hiala ao Karabakh ny vahoakan'i Karabakh, tsy maintsy monina ao Karabakh ihany ny vahoakan'i Karabakh, tsy maintsy manan-jo, fahafahana ary sata iray ny vahoakan'i Karabakh.”
Tamin'ny 21 Aprily, nandeha tany Maosko i Pashinyan ary nihaona tamin'ny Filoha Putin. “Tonga tamina fifanarahana iray ireo mpitarika roa ireo, mikasika ireo olana goavana maromaro, anisany amin'izany ny fandriampahalemana ao Nagorno-Karabakh, ny famahàna ireo fotodrafitrasa isam-paritra sy ny famaritana ny sisintanin'i Armenia sy Azerbaidjan”, hoy ny tatitry ny OC Media.
Ny tantaran'i Nagorno-Karabakh
Teo ambany fifehezan'ny fokon'ireo mponina Armeniana i Nagorno-Karabakh, amin'ny maha-Fanjakana nanambara tena azy nanomboka tamin'ny ady tamin'ny fiandohan'ny taona 1990, izay niato nohon'ny fampitsaharana ny ady tamin'ny taona 1994 sy ny fandresen'ny tafika Armeniana. Taorian'ny ady voalohany, Repoblika “de facto” vaovao iray an'i Nagorno-Karabakh, tsy nankatoavin'ny sehatra iraisam-pirenena, no nijoro. Faritany fito mifanila no nogiazan‘ireo tafika Armeniana. Vokatr'io ady io, “olona maherin'ny iray tapitrisa no voatery niala ny trano fonenany : nandositra an'i Armenia, Nagorno-Karabakh sy ireo faritany mifanila ireo Azerbaidjaney, raha ireo Armeniana kosa nandao ny fonenan'izy ireo tao Azerbaidjan”, araka ny voalazan‘ny International Crisis Group, fikambanana tsy miankina iray miasa ho fisorohana ny ady sy mamolavola politika.
Taorian'ny ady faharoa tao Karabakh tamin'ny taona 2020, niverina indray ny fanarahamaso nataon'i Azerbaidjan tamin'ireo faritany fito nogiazana teo aloha. Nogiazan‘i Azerbaidjan ihany koa ny ampahatelon‘i Karabakh vokatr'ilay ady faharoa.
Ny 10 Novambra 2020, nanao sonia fifanekena fifanarahana iray hampitsaharana ny ady i Armenia sy Azerbaidjan, izay Rosia no nifampiraharaha nanao azy. Anisany tamin'ireo teboka maromaro anatin'ilay fifanarahana, nifanaiky i Armenia sy Azerbaidjan tamin'ny fipetrahan'ireo tafika Rosiana mpampandry tany miisa 1 960 any amin'ireo faritr'i Karabakh “tsy azon'i Azerbaidjan sy ny lalantsara tery mampitohy an'i Armenia amin'i Azerbaidjan distrikan'i Lachin.” Misy 27 ireo tobin-tafika Rosiàna mpampandry tany ao Azerbaidjan.
Nandritra izany fotoana izany, nianiana ireo mpanao fihetsiketsehana fa tsy hiala ny faritra mandrapialan'ny Praiminisitra sy ny kabinetrany.